Sina azo antoka, azo itokisana ary mora apetraka amin'ny tontolon'ny varavarana ascenseur ary mpamatsy | Tianhongyi
Ny takelaka fidirana ao Tianhongyi dia mizara ho varavarana fidinana sy vavahady fiarakodia. Ireo izay hita avy any ivelan'ny ascenseur ary raikitra isaky ny gorodona dia antsoina hoe varavarana fidinana. Varavarana fiara no iantsoana azy.
Ny takelaka fidirana ao Tianhongyi dia mizara ho varavarana fidinana sy vavahady fiarakodia. Ireo izay hita avy any ivelan'ny ascenseur ary raikitra isaky ny gorodona dia antsoina hoe varavarana fidinana. Varavarana fiara no iantsoana azy. Ny fanokafana sy ny fanidiana ny vavahady fiakarana ascenseur dia takatry ny mpanokatra varavarana napetraka eo am-baravaran'ny fiara. Ny varavaran'ny gorodona tsirairay dia misy hidin-trano. Rehefa nakatona ny varavarana fipetrahana, dia miditra ny hidin-hidin'ny mekanika amin'ny hidin-varavarana, ary miaraka amin'izay dia mihidy ny varavarana fidinana sy ny vavahady mifampikasoka amin'ny herinaratra ao am-baravarankely, ary mifamatotra ny faritry ny fifehezana ascenseur, avy eo afaka manomboka mihazakazaka ny ascenseur. Ny valin'ny fiarovana ny varavaran'ny fiara dia afaka miantoka fa tsy afaka mandeha ara-dalàna ny ascenseur rehefa tsy mihidy tsara ny varavarana na tsy mihidy. Ny varavarana miantsona dia mazàna no misy ny varavarana, ny lalamby mpitari-dalana, ny vongan-tany, ny vavahady fikorisana, ny sarom-baravarana, ny varavarana ary ireo singa hafa. Izahay dia manao azy araka ny mpanamboatra varavarana, ny haben'ny tontonana am-baravarana, ny haavon'ny vavahady ary ny akora eo amin'ny vavahady nomen'ny mpanjifa. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra endrika vaovao mifanaraka amin'ny sarisarinao. Ny fomba fanokafana ny varavarana lehibe dia ny: fisarahana afovoany, fisarahana roa sosona, afovoany mizara roa sosona sns. Ny tena mahazatra dia ny fisarahana afovoany, ny sakan'ny fanokafana dia 700 ~ 1100mm, ary ny haavon'ny fanokafana dia 2000 ~ 2400mm. Afaka manome loko isan-karazany isika: loko, vy tsy misy fangarony, fitaratra, etsa, volamena titanium, volamena rose, titanium mainty, sns. Mba hahafahan'ny varavarana manana hery matanjaka sy henjana, ny taolan-tehezana manamafy dia omena ao ambadiky ny ny varavarana hiantohana ny tanjany, ny faharetany ary ny fiarovana azy. Ny rakotra varavarana avo dia mizara ho fonon-varavarana kely sy fonon-varavarana lehibe. Amin'ny ankapobeny, ny rakotra varavarana kely dia tsy maintsy ampidirina ho fenitry ny ozinina. Ity takelaka am-baravarana ity dia napetraka mba hanaronana ny elanelana misy eo amin'ny fiaran'ny ascenseur sy ny rindrina ivelany ary hanatsarana ny efitrano misy ny ascenseur. Amin'ny ankapobeny vita amin'ny vy vy izy io. Ny rakotra varavarana dia karazana rakotra varavarana haingon-trano. Vita amin'ny fitaovana isan-karazany izy io, tsy vy vy fotsiny, fa misy fitaovana hafa misy modely vato fakana tahaka ihany koa; ao anatin'izany ny rakotra varavarana miharo zinc-vy, rakotra varavarana plastika nano-vato sns. Amin'ny lafiny iray, dia afaka mitana andraikitra amin'ny fanaingoana ny ascenseur izany, ary amin'ny lafiny iray, dia afaka manonitra ireo olana tavela amin'ny fizotry ny fananganana sivily; , ohatra, raha toa ka lehibe ny elanelana eo amin'ny rindrina sy ny vatan'ny varavaran'ny ascenseur kely dia mila haingoina amin'ny rakotra varavarana izy io.
1. Fiatrehana ny fiantraikany: ny varavaran'ny fiaran'ny ascenseur dia takiana ao anatin'ny 5cm * 5cm amin'ny "GB7588-2003", miaraka amin'ny hery mitohy 300N ary ny herin'ny 1000N (mitovy amin'ny herin'ny olon-dehibe mahazatra exert, noho izany dia ampiasaina ho toy ny ascenseur Ny fonon-varavarana dia tokony hanana fatra fanoherana mitovy amin'ny fisorohana ny fahasimbana sy ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny zavatra mavesatra, fiara elektrika, bisikileta sns rehefa miditra na mivoaka ny ascenseur).
2. Tsy mahazaka rano sy tsy mahazaka afo: fitaovana manokana ny ascenseur. Tsy azo ampiasaina ny ascenseur raha sendra may. Na izany aza, amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny efitrano tohatra, ny fonon'ny varavarankely dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny afo (V0 na ambony) mba hanatsarana ny haavon'ny fiarovana amin'ny afo amin'ny ankapobeny; noho io antony io ihany, raha sendra tontolo iainana mando izy na hodorana, dia tsy maintsy alemana anaty rano mandritra ny 24 ora tsy misy endrika na triatra, mba hanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana ankapobeny.
3. Fiarovana: Amin'ny maha toerana be olona miditra sy ivelan'ny toeram-bahoaka, ny fiarovana no laharam-pahamehana. Ny sarom-baravaran'ny ascenseur dia tsy maintsy mahay vaky sy simba rehefa avy voadonan'ny hery manimba nefa tsy misy atahorana, ary tsy hianjera mihitsy mba tsy hampidi-doza na hanimba fiainana sy fananana.
4. Fiainan'ny serivisy: Amin'ny maha tranom-panjakana azy dia misy olona / entana maro miditra sy mivoaka ny ascenseur isan'andro, izay hiteraka fahasimbana lehibe sy fifandirana eo amin'ny fonon'ny varavaran'ny ascenseur. Ny fitaovan'ny fonon'ny varavarankely dia mila manaraka fenitra ambony kokoa hampitomboana ny fiainam-panompoany. Ny androm-piainan'ny ascenseur dia tsy latsaky ny 16 taona. Amin'ny maha singa ao amin'ny fonon'ny varavarana azy dia tokony ampiasaina raha toa ka ny ascenseur.
5. Fiarovana ny tontolo iainana: kely ny velaran'ny rakotra varavaran'ny ascenseur, saingy goavana ny isany. Ao amin'ny fiarahamonina maoderina izay lohahevitry ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy maintsy miantso ny fampiharana amin'ny lafiny maro ireo fitaovana sariaka amin'ny tontolo iainana isika. Mandraisa anjara amin'ireo renirano lehibe sy tendrombohitra any amin'ny tanindrazana sy ny tontolo maitso.
6. Dingana tsotra: Noho ny fiakaran'ny vidin'ny asa, ny tranobe, fanaka ary rakotra varavaram-baravarana haingam-pandeha dia nalefa, izay tsy vitan'ny fitsitsiana ny ora maha-olona sy ny vidin'ny mpiasa, fa mampihena ny fizotrany mifanaraka amin'izany koa, mba hahatratrarana fahombiazan'ny asa avo lenta sy angovo. Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fiarahamonina maoderina.
Fitehirizana entana sy fitaterana
Teo aloha: Elevator mpandefa zotram-pifandraisana tsy mifangaro
Manaraka: Elevator fampihetseham-pandehan'ny mpandeha tsy misy efitrano
Varavarana mihombo ho azy
Rindrambaiko avo roa heny
Operator varavarana ascenseur
Rindrambaiko miakatra amin'ny varavarana